MaGIF ave kutsigirwa muiyo iOS 11 Mifananidzo app | IPhone nhau
Sezvo mazuva achifamba yekutanga beta yeIOS 11 yevagadziri inosvinwa zvakanyanya uye nekuwedzera: nhau mazuva ese, zvinhu zvitsva zvisina kutaurwa mune yakakosha ... IOS 11 Mifananidzo Inoziva maGIF semifananidzo mhenyu uye nekuzvimisikidza ivo muarubhamu kunze kwemifananidzo yakamira, nenzira iyi kutsvaga mhando iyi yemifananidzo kunenge kuri nyore zvikuru neIOS 11. Idzo idiki shanduko dzinogona kubatsira iOS 11 kuvandudza ruzivo rwevashandisi kushandisa aya maGIF munguva pfupi. mameseji maapplication, semuenzaniso.
MaGIF akabatanidzwa muMifananidzo muIOS 11: inguva inguva
Kune avo vasingazive iyo GIF fomati fomati, iri yeanoratidzirwa fomati fomati iyo yakafanana neRararama Photo uye inogona kugoverwa uye kutariswa nevazhinji meseji meseji kunyorera. Ne iOS 11 tinogona kunakidzwa nemifananidzo iyi yakabatanidzwa muApp Photos.
Kunyangwe kubva kuAlbum pachayo isu tisingazive kana iri GIF, kana tikatsikirira zvakanyanya tichishandisa iyo 3D Kubata kana kuwana mufananidzo iwoyo, tinogona kuona kuti iri sei wakajeka mufananidzo, mune yakachena mhenyu Mapikicha maitiro (maererano nemaitiro ekuratidzira zvirimo).
Mufananidzo wacho unoramba wakamira kunze kwekunge taminya pairi, asi kana tichida kubvunza ese maGIF muraibhurari yedu yemifananidzo, Tine nyore kwazvo sezvo iOS 11 inogadzira yakasarudzika dambarefu remhando iyi yemifananidzo. Iyo iri nyore nzira yekuve maGIF ese aripo kuti ugone kuashandisa mune ese maficha. Pakupedzisira isu tinogona kusevha edu atinofarira anotamisa mifananidzo pane reel uye tigoiwana nekukurumidza uye nyore.
Sezvatinokuudza, nhau dzeIOS 11 dzinoramba dzichionekwa mazuva ese. Panguva ino, unogona kutarisa gumi nerimwe basa rinonakidza risina kutaurwa mune yakakosha mune iyi post kubva kune mumwe wangu Ignacio Sala.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Iyo iOS 11 Mifananidzo app inozopedzisira yaziva maGIF semifananidzo yemifananidzo
inoda apng rutsigiro futi
Pindura kune honekoneko